चीनले थप ३ लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन अनुदान दिने
निशान न्युज फाल्गुन १८, 2077
काठमाडौं । चीनले नेपाललाई अनुदानमा दिने कोभिड–१९ को खोप संख्यालाई बढाएर आठ लाख डोज पुर्‍याएको छ ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सोमबार साँझ एक ट्वीट गर्दै नेपाललाई अनुदानमा ८ लाख डोज खोप दिने निर्णय भएको बताएकी छन् ।
यसअघि चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई चीनले ५ लाख कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । माघ २३ गते नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग टेलिफोनमा वार्ता गर्दै वाङले उक्त प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
सुरुमा ३ लाख डोज दिने घोषणा गरेको चीनले पछि बढाएर ५ लाख पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि पनि चीनले थप ३ लाख डोज खोप थप गरेको घोषणा गरेको छ । चीनको खोपले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमित प्राप्त गरिसकेको छ ।
चिनियाँ राजदूतावासले उक्त भ्याक्सिन नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो ल्याउनको लागि पहल गर्ने जनाएको छ । पाललाई सबैभन्दा पहिले भारतले उसको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर कोभिसिल्ड भ्याक्सिन विकास गरेको भ्याक्सिन सहयोग गरेको थियो ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रुपमा विकास गरेको ‘एजेडडी १२२२’ नामक खोपलाई भारतको एसआईआईले ‘कोभिसिल्ड’ नाममा उत्पादन गरेको हो ।
नेपालले अनुदान बाहेक आफैंले पनि भ्याक्सिन खरिद गरेर ल्याइसकेको छ । नेपालले भारतबाट २० लाख डोज भ्याक्सिन खरिद गरेको छ । नेपालले भारतसँग खरिद गरेर ल्याएको पहिलो लटको भ्याक्सिन ल्याएर लगाउन थालिसकेको छ ।
कोरोना हटस्पोट बन्यो काठमाडौँ उपत्यका, एकैदिन थपिए १ हजार ५१ संक्रमित
काठमाडौँ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपतयकामा थप १ हजार ५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। ...
बुधबार थप २३५१ जनामा कोरोना पुष्टि, १० हजार ५८२ सक्रिय संक्रमित
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ३ सय ५१ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको ...
बाँकेमा बिहीबारदेखि लकडाउन हुने, अति आवश्यक सेवाबाहेक सबै क्षेत्र बन्द रहने
नेपालगञ्ज । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै बाँकेमा लकडाउन गर्ने भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानरपालिका...
२४ घण्टामा थपिए १७३६ जना कोरोना संक्रमित, १४ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ७ सय ३६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको ...
स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनले दोस्रो चरणको खोप अभियान प्रभावित
काठमाडौँ । काठमाडौँ । आजबाट सुरु हुने भनिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान काठमाड...
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२८१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, काठमाडौंमा मात्रै ६३४ जना संक्रमित भेटिए
काठमाडौं । केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेको बढ्यै छ । पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार २ सय ...
एनआरएन अमेरिकाको उपसभापतिमा बासुदेव अधिकारीले उम्मेदवारी दिने
पेन्सलभेनिया (अमेरिका) । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) अमेरिकाको उपसभापतिमा व्यवसायी बासुदेव अधि...
जस्तोसुकै अवस्था आए पनि एमालेभित्रै बसेर संघर्ष गर्ने अर्याल होटलबाट आयो यस्तो सन्देश
सूर्यबहादुर थापाको छैठौं स्मृति दिवस : छोराले भुले, भतिजले सम्झिए
वर्तमान अस्थिरताको निकास : एकमात्र विकल्प राष्ट्रिय सरकार निर्माण
समता समाज र जनजाति सम्मेलनले मनाए ३४औँ संयुक्त स्थापना दिवस
होटल मेरियटमा खुल्यो ओली–नेपालको वार्ताको ढोका, मुस्कानले सुक्ला त कारवाहीको मसी ?
पत्रकार मिश्रको कोडिभका कारण मृत्यु
वैशाख मसान्तसम्म ठूला शहरका विद्यालय बन्द, कुनकुन शहरमा बन्द हुन्छ ?
हरिद्वारमा गंगा स्नान गरेर फर्किएका पूर्वराजा शाह दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण